Dirqalawwanii itti aanan, yeroo ati Kasaa Aabaa, akka Akaakuu kasaatti filattu ni jiratu.
Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)
Akaakuu fi Mataduree
Akaakuu fi mataduree kasaa ifteesi.
Kasaa filatameef mataduree galchi.
Geedaramawwan hojjaarkaa iraa hayyifamaa
Galmee yk boqonnaa ammaa keessaa isa kamiif kasaa akka uumtu filadhu.
Galfatoota walfakkaatan wal-qabsiisi
Galmee keessatti galfataalee kasaa walfakkaatoo, galfata baaqee, isa lakkofsaalee fuula galfatni irratti argamu tarreessuun bakka buusa. Fakkeenyaaf, galfataaleen "10 dawaadhu, 43 daawadhu" jedhan akka "10, 43 daawadhu" jedhanitti wal-qabsiifamu.
Combine identical entries with f or ff
Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.
Galfataalee kasaa walfakkaatoo warra fuula walitti aanan irratti argaman, galfata baaqee fi hangii lakkoofsaa galfatni irratti argamu ittiin bakka buusa. Fakkeenyaaf, galfataaleen jedhan akka "10 dawadhu, 11 daawadhu, 12 daawadhu" akka "10-12 dawadhu" jedhanitti wal-qabsiifamu.
Galfataalee kasaa walfakkatoo keessatti, qubeewwan guguddaa fi xixiqqaa gidduu, adda adda baasa. Afaan Eeshiyaaa warra ta'aniif qabannaa addataatu hojjeta. Dhufaatiin yeroo jalqabaa kan galfata galmee keessaa guddina fi xiqqina qube akka murteessu yoo barbaade, Galfatoota walfakkaatoo wal-qabsiisifiladhu.
Foyyadeenya sadarkaawwan adda addaa afaan Eeshiyaatiif yoo fayyadamuu barbaade, Qub-suukanaawaafiladhu. Foyyadeenya sadarkaawwan adda addaa sana keessatti, guddinaa fi xiqqinni akkasumas gubjaltootni galfatoota tuffatamanii, unkaalee dakoo galfatootaa qofatu walitti madaalama. Yoo unkaaleen isaanii walfakkaatoo tahan, gubjaltoota isaantu walitti madaalama. Yoo ammaalee unkaaleen isaanii walfakkaatoo tahan, guddinaa fi xiqqina qubee, yabbina arfiiwwan akkasumas addaddummaa Japanese Kana isaan gidduutu madalama.
Jalqaba qubee galfata kasaa ofiin qubguddaaassa.
Furtuulee akka galfatoota foo'ameetti
Furtuulee kasaa akka galfatoota kasaa foo'ameetti saaga. Furtuun tokko akka sadarkaa gubbeetti, galfatootni furtichatti ramadamn ammoo akka galumsa galfatoota xiqqatti saagama.
Furtuu kasaa qindeessuuf, qaaqa Galfata Kasaa Saagi filadhu.
Galfatoota kasaa, faayilii walta'iinsaa - tarree jechootaa kasaa tokko keessatti makuuf jecha, ofumaan mallatteessa.
Faayilii walta'iinsa tokko, filadhu, uumi, yk gulaali.
Galfatoota kasaa foo'insaaf, filannoo qindeessa.
Galfatoota kasaa foo'insaa fayyadamuudhaaf, seera afaanii filadhu.
Yoo lakkoofsoota gatiidhaan, akka 1, 2, 12 keessatti fo'uu barbaadduu, lakkoofsaan kan jedhu filadhu. Yeroo lakkoofsoota lakkaddaa arfiiwwan, akka 1, 12, 2 keessatti fo'uu barbaaddu ammoo, katabbii fayyadami.
This page is: /text/swriter/01/04120212.xhp
Title is: Kasaa